..त्यसपछि उनले ज्यान लिए ! – Online Nepalaja
February 17, 2021 63
काठमाडौ । वैतडीकी १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको घटनामा प्रहरीलाई ठुलो सफलता मिलेको छ । प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका ब्यक्तिलाई बुधवार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । पक्राउ परेका ब्यक्ति उनकै सहपाठी र नातेदार पनि भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनामा उनी अध्ययनरत विद्यालयमा पढ्ने एक किशोरलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। भागरथी मृ त भेटिएको १३ औँ र बे प त्ता भएको १४ औँ दिनमा प्रहरीले ती किशोरलाई पक्राउ गरेको पुष्टि गरेको छ। उनी भागरथीकै गाउँ बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका ७ का दिनेश भट्ट रहेको बताइएको छ ।
सनातन धर्म माविमाको कक्षा १२ मा पढ्ने भागरथीलाई दिनेशले लामो समयदेखि एकतर्फी रुपमा मन पराएको र १३ दिनअघि स्कुलबाट एक्लै फर्किएको मौ’का छो’पे’र यो घटना घटाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पोस्टमार्टम रिपोर्टले उनको कर णी पछि घाँ’ ‘टी नि’मो”ठे’र ज्या ‘न लिएको देखाएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले सुरुमा भागरथीलाई भी’रबाट ल ‘डा’ए’को र घा’इते अ’वस्थामा कर णी ग’रे’को बयान दिएका छन्। दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै पी’डित पक्षले अस्पतालमै श’व छाडेर आन्दोलन गर्दै आएको छ।
Prevविनयजंग बस्नेत पक्राउ परे लगतै सपना रोका मगरले लेखिन यस्तो भाबुक स्टाटस-
Nextभागरथी घटनामा उनकै भाई संलग्न ! बयानमा भन्छन् ‘दिदी चाउचाउ खाँ दै आइन्, पछाडीवाट ध क्का दिएर ल डाएँ’
भाइरल हुनकै लागि यी युवतीले जे खाइन हेर्नुहोस
सुतेका थिए उनि….. तर उठ्दा विश्वभर भाइरल भैसकेका थिए (तस्विर सहित) (454)
भाइरल हुनकै लागि यी युवतीले जे खाइन हेर्नुहोस (387)